1. ကယားပြည်နယ် ခုနစ်စဉ်ကြယ် - ရဲထွန်း
... - ရဲထွန်း ပင်လုံဇာတ်ကြောင်း - ရဲထွန်း ဘားအံဝန်းကျင် ဇွဲကပင် - ကော်သူးလေ-ကျော်စန်းပွင့် သမိုင်းဝင် စာတမ်းများ နှင့် ကယားပြည်နယ် (ဒုတိယတွဲ) ကယားတို့ဌာနီ ငွေတောင်ပြည် - စာရေးဆရာ ဒါရိုက်တာ မြင့်မောင် ...
2. မုံးမြိတ်၊ ဆင်လီ ကချင်ဆပ်စတိတ်သမိုင်း
... (ဃ)နမ္မတူ ကိုးတောင်နယ်ဖက်မှ ချီတက်လာခြင်း (င)ကွတ်ခိုင်ကချင်ကျောင်းသားများ၏ဆန္ဒပြပွဲ အခန်း ၉။ ပင်လုံစာချုပ် (က)ပင်လုံညီလာခံတက်ရောက်ရေး (ခ)ရှမ်းနှင့်ကချင်ကိုယ်စားလှယ်များ၏အစည်းအဝေး (ဂ)ပင်လုံညီလာခံသဘောတူစာချုပ် ...
3. ပꨤင်လူင် - ပင်လုံ သျှမ်းသံတော်ဆင့် သတင်းဂျာနယ် အတွဲ(၂) အမှတ်(၂)
eBook file size: 8.07 MB ebook pages: 20 Publication: March, 2014, www.panglong.org Download
4. THE FOUNDING OF THE UNION OF BURMA THROUGH THE HILL PEOPLES EFFORTS - The Memoirs of Khun Kya Bu of Hsipaw Signatory to the Panglong Agreement
eBook file size: 227 KB ebook pages:5Publication: This article was taken from http://www.shanland.org/oldversion/index-3146.htm download -Related Articles- Panglong ပင်လုံ ပꨤင်လူင် ...
5. ပင်လုံကျောက်တိုင် တည်ဆောက်သူများ - သန်းဝေ(တောင်ကြီး)
... ပင်လုံ ပꨤင်လူင် Panglong ...
6. ပင်လုံစိတ်ဓာတ် - ယုဝတီဂျင်းဖောမယ်
eBook file size: 84.0 KB ebook pages:7Publication: ၁၉၉၇-ခုနှစ်၊ ရန်ကုန်မြို့ တောင်ကြီးအသင်းမှ ထုတ်ဝေသော ရွှေရတုရှမ်းပြည်နယ်မဂ္ဂဇင်းတွင် ပါသော ဆောင်းပါး။ download -Related Articles- ယုဝတီဂျင်းဖောမယ်၏စာအုပ်ဆောင်းပါးများ ...
7. ပင်လုံကျေးဇူး - တင်ဧ(ရှမ်းပြည်)
eBook file size: 102 KB ebook pages:6Publication: ၁၉၆၈ ခုနှစ်၊ ဖေဖေါ်ဝါရီလထုတ် ငွေတာရီမဂ္ဂဇင်းတွင် ပါသော ဆောင်းပါး။ download
8. ကိုယ်တွေ့ပင်လုံ - ဦးဖေခင်
eBook file size: 1.16 MB ebook pages: 100 ပုံနှိပ်ခြင်း - သြဂုတ်လ၊ ၁၉၉၀ ခုနှစ်။ download